कथित चुनाव र नेपाली राजनीति - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
चुनावबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पाेलिटब्यूराे सदस्यकाे गहन विश्लेषण
सुन र जलप लगाएको फलाम पाइन लगाएपछि छुट्टिन्छ । क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति ठिक र बेठिक वर्ग संघर्षले छिनोफानो गर्ने हो । नेपालको क्रान्तिकारी धारा क्रान्ति होइन क्रान्तिको पूर्वाभ्यास कै चरणमा छ । अब इमान्दार बुद्धिजीवी र भाडाका बुद्धिजीवीको पहिचान पनि खुल्दै जानेछ । बुद्धिजीवी कृष्ण खनालले कतै लेखेका छन् – …… त्यो समूहलाई जिम्मेवार मान्ने हो भने उसको राजनीतिक आयतन निकै बढेको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको शान्ति प्रकृया असफल भएछ भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्व र सांगठनिक पकड पूरै गुमाएछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र विद्रोहका क्रममा उसले हिजो प्रयोग गरेका औजार, अपनाएका प्रविधि र प्रशिक्षित गरेका जमात आज उसको पकडबाट बाहिरिएका छन् र राजनीतिक वा आपराधिक जनुसुकै प्रयोजनका लागि उपलब्ध छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुछ । चुनावपछि माओवादी केन्द्र त एमालेमा विलय होला तर सशस्त्र विद्रोहको उसको विरासत नयाँ संगठित राजनीतिक चुनौतिका रुपमा पुनरुत्थान हुन थालेको संकेत दिन्छ । माक्र्सवाद गणितको सुत्र होइन, पथप्रदर्शक हो । माओ त्सेतुङ्गले च्याङ काई शेकका मतियारलाई ‘तिमी तिम्रो तरिकाले लड, हामी हाम्रो तरिकाले लड्छौं’ भन्नुभएको थियो । नेकपाले आफ्नो चुनाव खारेजी अभियानको विषयमा पार्टी, कार्यकर्ता, जनता र भाइचाराहरुको हित र आवश्यकतामा कहिले बोल्ने ? के के बोल्ने ? निर्णय गर्ने नै छ । नेकपाको लड्ने आफ्नै तरिका छ, महोदय ! ऊ तिम्रो तरिका र अपेक्षानुसार लड्दैन ।
चितवनमा प्रचण्डले सुरुदेखि नै लिए अग्रता